काठमाडौं उपत्यकामा शनिवार थपिएका संक्रमित कुन जिल्लाका कति ? - Lokpath Lokpath
२०७७, १७ श्रावण शनिबार १६:५४
काठमाडौं उपत्यकामा शनिवार थपिएका संक्रमित कुन जिल्लाका कति ?
प्रकाशित मिति : २०७७, १७ श्रावण शनिबार १६:५४
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा शनिवार ६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेमा पाँच जना काठमाडौंका रहेका छन् भने एक जना भक्तपुरका रहेका छन् ।
रष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको स्वाब परीक्षणमा काठमाडौं २ जना, नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशाला महाराजगञ्जमा गरिएको स्वाब परीक्षणमा काठमाडौंका १ जना, नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल भक्तपुरमा गरिएको स्वाब परीक्षणमा काठमाडौंका २ जना र भक्तपुरका १ जनामा गरि शनिवार उपत्यकामा ६ जनामा कोरोना संक्रमण्ढा पुष्टि भएको हो ।